သြဂုတ်လ 2015 |3၏စာမျက်နှာ 55 | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » 2015 » သြဂုတ်လ (စာမျက်နှာ 3)
လစဉ်မော်ကွန်း: သြဂုတ်လ 2015
Towson တက္ကသိုလ်တည်နေရာ: TowsonTigers.com များအတွက်မူရင်းမာလ်တီမီဒီယာနှင့်ဗီဒီယိုအကြောင်းအရာဖန်တီးရန်အသစ်သောမီဒီယာဌာနနှင့်အတူ Towson MD အမေရိကန်လုပ်ငန်းခွင်; အားလုံးဌာနဆိုင်ရာများ၏ဒီဇိုင်းနှင့်ထုတ်လုပ်မှုကိုကြီးကြပ် ... နောက်ထပ် >>
Loft9 အတိုင်ပင်ခံတည်နေရာ: Redmond WA အမေရိကန်အသံထုတ်လုပ်မှုအသေးစားနှင့်အလတ်စားလုပ်ငန်းများ။ ဒီ post အဘို့, Loft9 >> ပို ... Localization အတွက်အထူးပြုသည့်ဆောင်ရွက်သောဝဘ်ဆိုက်စီမံခန့်ခွဲဝန်ဆောင်မှုအသင်း join ဖို့အချိန်ပြည့်အသံအင်ဂျင်နီယာများရှာဖွေနေသည်
Viaccess-Orcas IBC2015 မှာတရားမဝင်လွှနှင့် Big Data အပေါ်အားဆင့်ဆိုရမည်မှာရန်
ပဲရစ် - သြဂုတ်လ 28, 2015 - Viaccess-Orcas, အကြောင်းအရာန်ဆောင်မှုများကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့်တိုးမြှင့်အတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်, ဒါဝိဒ်သည် Leporini, EVP စျေးကွက်ရှာဖွေရေး, ထုတ်ကုန်များနှင့်လုံခြုံရေး, content တွေကိုဝန်ဆောင်မှုများအတွက်တရားမဝင်အကြောင်းအရာပြန်လည်ခွဲဝေမှု၏အန္တရာယ်အကြောင်းကိုပြောမည်ယနေ့ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည် IBC2015 မှာပေးသူ။ စက်တင်ဘာ 10 တွင်, 11 မှာ: 00 နံနက်, သူက "ဗိသုကာပညာနှင့် Protocol များ Power အမည်ရနည်းပညာတင်ဆက်မှုကိုပေးမည် ...
IBC2015: Zylight ပြိုင်ပွဲအခမဲ့တွင်-ကင်မရာမီးကမ်းလှမ်း 'ဆိုတဲ့ Newz ပျံ့နှံ့' '
Los Angeles - Zylight, ဆန်းသစ် LED မီးအလင်းရောင်ဖြေရှင်းချက်၏ဦးဆောင်ထုတ်လုပ်သူ၎င်း၏ Newz On-ကင်မရာအလင်းအကြောင်းကိုတွစ်တာမှတဆင့် "ဟုအဆိုပါ Newz ပျံ့နှံ့" ကို IBC2015 တက်ရောက်အားပေးအားမြှောက်ဖြစ်ပါတယ်။ RAI အမ်စတာဒမ်မှာစက်တင်ဘာ 11-15 ပြေးရသောပြပွဲကာလအတွင်းနေ့ရက်တိုင်းအသစ်ကအလင်းအကြောင်းကို tweets သူတစ်ဦးရန် #SpreadTheNewz IBC Giveaway, Zylight လိမ့်မည်ဆုချီးမြှင့်တဦးတည်း Newz, စဉ်အတွင်း။ အခမဲ့ငါးရက်ကြာ ...
JVC GY-LS300 4KCAM တီဗွီကင်မရာနှင့်အတူမိုင်ယာမီပါမောက္ခမိတ်ဆက်ကျန်းမာရေးမှတ်တမ်းရုပ်ရှင် Project မှတက္ကသိုလ်
ဝိန်း, NJ - ။ JVC Professional ကဗီဒီယို, JVCKENWOOD အမေရိကန်နိုင်ငံကော်ပိုရေးရှင်း၏ဌာနခွဲ, ယနေ့ Sanjeev Chatterjee, Coral Gables, Fla အတွက်ဆက်သွယ်ရေးတက္ကသိုလ်မိုင်ယာမီ၏ School မှာပါမောက္ခကြေညာရန်အသစ်ကို JVC GY-LS300 လက်ကိုင်စူပါ 35 4KCAM တီဗွီကင်မရာကိုအသုံးပြုနေသည် ကျန်းမာစားလောက်ကွဲပြားခြားနားသောချဉ်းကပ်မှုအကြောင်းကိုမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ရိုက်ကူး။ သူသည်ယခုနွေရာသီတွင်ဥရောပ၌ 4K အင်တာဗျူးရိုက်ကူးစုဆောင်းစတင် ...
Sally အလှအပ Holdings က, Inc တည်နေရာ: ဒဲ TX အမေရိကန်ပြင်ပတွင်ထုတ်လုပ်မှုအရင်းအမြစ်များအလုပ်စီစဉ်ဆောင်ရွက်သည်နှင့်ထုတ်လုပ်မှုထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးထိန်းချုပ်သည်။ အဆိုပါမီဒီယာထုတ်လုပ်ရေးအထူးကု >> နောက်ထပ်သင်တန်း ... အတူအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်
အနိမ့်စျေးနှုန်း! Blackmagic ဒီဇိုင်းကိုသင်ရန်အတွက်ဒါဟာဆောင်ကြဉ်း #IBC2015
Blackmagic ဒီဇိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းယနေ့အများဆုံးဖန်တီးထုတ်လုပ်သူတစ်ဦးက HD နဲ့က Ultra HD ကိုစတူဒီယိုကင်မရာများသူတို့ရဲ့ဆုရစတူဒီယိုကင်မရာမော်ဒယ်များအတွက်စျေးနှုန်းကျဆင်းရန်ကုမ္ပဏီအတွက်ခွင့်ပြုထားတဲ့အသုံးပြုသူက installed option ကိုနှစ်ဦးစလုံးအပေါ် optical fiber ကိုဆက်သွယ်မှုစေမည်ဖြစ်ကြောင်းကြေညာခဲ့သည် ! အတော်များများဖောက်သည်ဒီအပိုကုန်ကျစရိတ် option ကိုပါလျှင်ရန်အဖြစ်တုံ့ပြန်ချက်ပေး ...
3 ၏စာမျက်နှာ 55«12345 » 102030...နောက်ဆုံး»